ရဲရဲဖြေကြည့် (ခရစ်ယန် အမေး၊ MG အဖြေ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရဲရဲဖြေကြည့် (ခရစ်ယန် အမေး၊ MG အဖြေ)
ရဲရဲဖြေကြည့် (ခရစ်ယန် အမေး၊ MG အဖြေ)
Posted by mggwa on Oct 15, 2011 in Copy/Paste | 37 comments
တစ်ခါမှတော့ post မရေးဖြစ်သေးဘူး၊ သူများတွေရေးတဲ့ post တွေမှာပဲ ၀င်ဂွကျနေတာ၊
အခု စိတ်ကူးပေါက်လို့ MG မှ comment မိတ်ဆွေများကို အုံး (ဦးခါင်း) နဲနဲစားလိုက်ဦးမယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ခရစ်ယန်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို မေးခဲ့ဘူးတဲ့
၁။ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ဘုရားတွေပွင့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ ရှေးဘုရားတို့ရဲ့ အလေ့အထအတိုင်းပဲ လိုက်နာတယ်၊ ပထမဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့ ဘုရားက ဘယ်ဘုရားရဲ့ အလေ့အထတိုင်းနေသလဲတဲ့။ (အဲဒီဘုရားရှေ့မှာ ပွင့်တဲ့ဘုရားမှ မရှိသေးတာ)
၂။ ဘုရားတစ်ဆူမှာ ၂၄-အသင်္ချေ၊ ကုဋေ ၈၀နဲ့ ဗိုလ်ခြေတစ်သိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်မယ်ဆိုပဲ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်ဘုရားလက်ထက်မှာ သတ္တ၀ါတွေကုန်မလဲတဲ့။
၃။ အတိတ်ဘ၀က ကံတွေကြောင့် လူတွေဖြစ်ရတာဆိုရင် အဲဒီလူဖြစ်ဖို့ အတွက် ပထမဦးဆုံး သတ္တ၀ါကို ဘယ်သူ ပြုလုပ်တာလဲတဲ့။
၄။ မြင့်မိုရ်တောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တောင်အရပ်ကို သင်္ဘောနဲ့သွားတာ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရဘူးတဲ့။
ဒါဆိုရင် မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ် တာဝတိံသာမှာ ဟောတဲ့ အဘိဓမ္မာကြီးက ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲတဲ့။
၅။ တချို့လူတွေ (သေပြီးမှ မဟုတ်ပဲ) ထိုသူ မသေသေးပဲ လူဝင်စားသလိုပြန်ဖြစ်နေခြင်း၊
အဲဒါ ဘယ်အတိတ်ဘ၀ကံတွေက ဖန်တီးတာလဲတဲ့။
စတဲ့ လဲပေါင်းများစွာနဲ့ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲက ပါးပါးလေ စွဲထုတ်ပြီး အဖြေညှိကြည့်ကြတာပေါ့။
(စာတတ်၊ ပေတတ်၊ ကျမ်းဂန်တတ်တွေတော့ ဖြေထားပြီးဖြစ်၏။
ဘယ်စာအုပ်နဲ့ ဘယ်ကျမ်နဲ့မှ ညီပါ့မလားလို့ မရဲတရဲ မဖြစ်စေလိုပါ။
View all posts by mggwa →
(ဘာသာရေးကွိုင်တက်အောင်တော့လာ မစားနဲ.။တစ်ခြားနေရာမှာသားဂွကျပါ။)လို့တော့ အထင်တော်မလွဲလိုက်ပါနဲ့ မောင်ကြီးရယ်။ အယူတွေရှင်းစေချင်လို့ပါ။
ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်၊ ပြီးပြန်ရှင်းရတယ်တဲ့။
နဂိုက ဘာမှ မတွေထားလို့ ဘာသံသယမှ မရှိတာဟာ ၀ိစိကိစ္ဆာ စင်တာမဟုတ်။ အဲဒါ သူများပြောတိုင်း ယုံတာ။
ကိုယ်တိုင်သိ (ဒိဋ္ဌိကင်း)မှ ၀ိစိကိစ္ဆာ စင်တာ ဒါမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ။
မြန်မာဦးနှောက်တွေက တစ်ခါမှ မသုံသေးလို့ ဈေးကြီးနေလို့ ဈေးကျသွားအောင်လို့ပါ။
ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ဘုရားတွေပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့
ဘုရားတစ်ဆူမှာ ၂၄-အသင်္ချေ၊ ကုဋေ ၈၀နဲ့ ဗိုလ်ခြေတစ်သိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်ပဲ အဋ္ဌကထာဆရာတွေရဲ့ အာဘော်သာဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တစ်ချို့က သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ဘုရားတွေပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဂျိန်းဘာသာမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ယနေ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလည်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်နဲ့ ဂျိန်းဘုရားရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ တချို့သွားတူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မမွေးခင် အတိတ်ဘ၀က ကံတွေက လူကို ဖန်းတီးတယ်ဆိုတဲ့ အယူဟာ ဂျိန်းဘာသာရဲ့ အယူလို့ ဝေဖန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုတာတော့ မေရုဆိုတဲ့ အမည်ကို ဘာသာပြန်တာ မြင့်မိုရ်တောင်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ။
ဒါဗုဒ္ဓခေတ်က ဒေသသုံး (အပြင်မှာ တကယ်မရှိပဲ စိတ္တဇနာမ်အနေဖြစ် သုံးတဲ့) စကားတစ်ခုပဲလို့ ဖွင့်ဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ယနေ့ခေတ် အီကွေတာမျဉ်းလိုပေါ့။
အီကွေတာမျဉ်းကို အပြင်မှာရှာရင် မတွေ့နိုင်ပါ။ စာရွက်ပေါ်မှာသာပြောဆိုရတဲ့ အမည်ပါ။
တာဝတိံသာမှာဟောတဲ့ အဘိဓမ္မာကြီးကတော့ တတိယသင်္ဂါယနာမှ ပေါ်လာတာလို့ ပြောကြတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။
လူဝင်းစားဆိုတာ သေပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့ သဿတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူလို့ အဗျာကထနတရားတွေမှာ အသေအချာဟောထားတော့ ဒါ ဗုဒ္ဓအယူ မဟုတ်နိုင်ပါ။
ဟာဟာဟာ့…မောင်ဂွနဲ့ ရီးရဲမန်းလုပ်နေပုံက လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြံ့ဖွတ်အမတ်တွေ တဦးကအဆိုတင်သွင်း ကျန်တဦးက ထောက်ခံနေတဲ့ အတိုင်းပဲ။ နောက်ထပ်လာကြပါလိမ့်အုံးမယ်။ မိုးပြားလွှတ်တော်ပေါ့ဗျာ၊ ကောင်းကင်ကြီးကို ပြားတယ်ထင်နေသူများပေါ့။
ဖြေ – အဲဒီမေးခွန်းကို ပြန်ဖြေထားတဲ့စာတပုဒ်ကို အင်တာနက်မှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ ရှင်ဥက္ကဌရေးသလား၊ ဘယ်သူရေးသလဲ မသိတော့ပါ။ ဘုရားက အကြောင်းအကျိုးကို ပဋိစသမုပ္ပကို သာပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒလို အစကနေ ဖြစ်လာတဲ့အယူ မရှိပါဘူး။ မောင်ဂွလည်း သိသိကြီးနဲ့ မေးတယ်ထင်ပါတယ်။ ဖတ်လိုက်တုန်းကတော့ ရှင်းသလိုပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အသုံးမလိုလို့၊ ဗုဒ္ဓဝါဒ အနှစ်သာရနဲ့ မဆိုင်လို့ ကောင်းစွာမှတ်သား မထားလိုက်ပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်အယူလို အစရှိတယ်လို့ပြောလဲ အစရဲ့အစဆိုတာ ရှာမတွေ့နိုင်လို့ သိပ်မစဉ်းစားတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဘုရားဟော မကြံစည်အပ်တဲ့အထဲမှာ ဘုရားရဲ့တန်ခိုးတော်၊ စတြာဝဠာအကျယ်အဝန်း၊ ကံအကျိုးပေးပုံ၊ လောကအစနဲ့အဆုံး တွေဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ လျောက်တွေးနေလို့ ကိုယ်ကျင့်ရမဲ့တရားအလုပ် ပျက်တာပဲရှိပြီး အကျိုးမဲ့စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ – စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးလား မသိဘူး ဖြေထားတာလေးကို သဘောကျပါတယ်။ ကမ္ဘာအသင်္ချေသာ ကုန်သွားမယ်၊ သတ္တဝါတွေရဲ့ ကိလေသာတဏှာ မကုန်ဘူး၊ တိုးပွားနေတာပဲ ရှိတယ်တဲ့။ သတ္တဝါအားလုံး ကိလေသာငြိမ်းသွားရင် အကုန်ကျွတ်ပါမယ်။ အကုန်လုံး ကိလေသာ ငြိမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဆိုရင် ဘယ်ဘုရားလက်ထက် အကုန်ကျွတ်မလဲ ခေါင်းရှုပ်မခံပါနဲ့။ ဘယ်သူကျွတ် မကျွတ်ထက် အဲဒီအထဲ ကိုယ်ပါသွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဖြေ- ပိဋကတ်ကျမ်းလာအရကတော့ ဗြဟ္မာကြီးလေးဦးက စခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါ။ ဘယ်သူစစ၊ ဘယ်လိုစစ ကိလေသာငြိမ်းဖို့၊ အကုသိုလ်နဲဖို့၊ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းဖို့ အထောက်အကူပြုပုံ မရပါ။
ဖြေ – သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သုံးပါးပြည့်စုံရင် (အနည်းဆုံး ရှေ့နှစ်ပါး ပြည့်မှီရင်) တွေ့ကောင်းပါမယ်။ မောင်ဂွနဲ့ မိုးပြားအဖွဲ့ပုံကြည့်ရတာ အပ်ချည်တမျှင်စာလောက် သီသီလေး လိုနေလို့ မတွေ့သေးတာ နေမှာပါ။ အားမလျှော့ပါနဲ့ သဒ္ဓါအရင်းခံပြီး ဆက်ကြိုးစားပါ။ ဒီဘဝမတွေ့ သေတဲ့အခါ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ (မြင့်မိုရ်တောင် မတွေ့ဘဲ ငရဲမီးတွေ့ရင်လည်း တကျမ်းထဲလာမိုလို့ ယုံလိုက်ကြပါ)
ဖြေ – သဂျီးပြောလေ့ရှိတဲ့က ဂေဟစနစ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ သဘာဝက အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့ နိယာမ စနစ်တခုပါ။ ဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့တဲ့ အယူသီးအစွန်းယောက် အတွေးအခေါ် ထွန်းကားလာတဲ့အခါ မောင်ဂွတို့လို အစဉ်းစားလွန်ပြီး နားထင်သွေးရောက်တဲ့ တဖက်အစွန်းဝါဒ ပြန်ပေါ်လာပေးရပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ စပ်လို့ထင်တာပြောရရင် အတိတ်ဘဝမှာ ဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့သူများ ယခုဘဝမှာ အလွယ်ယုံတတ်သလို တလွဲတွေးရင်းနဲ့ သာသနာနဲ့လွဲခဲ့သူများ ဒီဘဝမှာ မမောမပန်းနိုင် ဆက်တွေးပါတယ်။ အထုံပေါ့ဗျာ။ အခုတွေးတာ အရင်ကတွေးခဲ့လို့ နောင်လည်းတွေးအုံးမယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကံဖြတ်နိုင်ပါစေ။
ကြောင်ကြီ:တို့ကလည်း မြန်မာထေရ၀ါဒရဲ့စာပေအဖွင့်တွေနဲ့ မတူတိုင်း မိုးပြာအဖွဲ့ကလို့ပဲ ယူဆကြတယ်နဲ့ တူတယ်။
မောင်ဂွတော့မပြောတတ်ဘူ။ realman ဆိုတာ အမှန်တရားကို မျက်စိမပိတ်၊ အစွဲမထားပဲ အမှန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူပါဗျာ။
(စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးလား မသိဘူး ဖြေထားတာလေးကို သဘောကျပါတယ်။ ကမ္ဘာအသင်္ချေသာ ကုန်သွားမယ်၊ သတ္တဝါတွေရဲ့ ကိလေသာတဏှာ မကုန်ဘူး၊ တိုးပွားနေတာပဲ ရှိတယ်တယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် ) စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးက ဘုရားမိုလို့လားလို့ ပြန်မေးလိုက်ပါရစေ။
ဒါကြောင့် အဋ္ဌကထာ(ပြန်ဆိုတေးလို ပြန်အဖွင့်တွေ)မှာ သောင်တင်နေတယ်လို့ ပြောကြတာ။ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်တွေနဲ့စဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်။
စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးသည် ဘုရားမဟုတ်ပေမဲ့ မောင်ဂွနဲ့ မောင်ဂွဆရာသမားများထက် ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပမာ အပုံကြီးသာ အားကိုးလောက်ပါတယ်။ ဘုရားဟော ပိဋကတ်သုံးပုံလာ စာတွေကို ညဏ်မမှီလို့ ကိုယ်နဲ့သင့်ရာ ရိုးရှင်းစွာ ညွှန်ပြသွားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အဆုံးအမများကို မှတ်သားနာယူ အားထုတ်ပါတယ်။ real man လည်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ထင်တလုံးဖြစ်နေရာမှ လွတ်နိုင်ပါစေ။
လာပြန်ပြီ ကြောင်ကြီးတို့ ထစ်ခနဲရှိမိုးပြာပဲ။ ထေရ၀ါဒစွဲစာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တိုင်း မိုးပြာလို့ပဲ ထင်နေတြယ်။ တော်တော်ကြောက်ကြပုံရတယ်။ ထေရ၀ါဒစွဲကို မိုးပြာတစ်ခုထဲက လက်မခံတာလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ကိုကြောင်ရယ်၊
ဒို့ကတော့ – – – ဒို့ကတော့ – – – ပြာတာ – ၀ါတာ ၊ နီတာ စိတ်မ၀င်စား မှန်တာကိုပဲ စိတ်ဝင်စား – – – – — ။
လမ်းမှားမှာ လျှောက်နေတဲ့သူကများ လာ လာချည်သေး ။ အခုဘ၀မှာ
မောင်ဂွ လျှောက်နေတဲ့လမ်းဆုံးရင် ရွာသာကြီး စိတ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကို ရောက်မှာပါ ။
သေသွားပြီးရင်တော့ ငရဲပြည်ကို ပတ်စပို့ မလိုပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ဆက်လျှောက်
ကိုယ့်လူ apulay က တကယ်မရှိတဲ့အရာတွေ၊ မသိတဲ့အရာတွေ ကို တွေးကြောက်နေတဲ့ စိတ္တဇသမားတွေထဲမှာပဲရှိနေသေးတော့
အင်း – – – ရွာသာကြီး စိတ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကတောင် နိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်လူရေ။
ကိုယ်လူတို့လို အစွဲကြီးတဲ့ စိတ္တဇသမားတွေကို ဘုရားတောင် ရှိရင် လက်ရှောင်လောက်တယ်။
မိရိုးဖလာအစွဲ လမ်းမှားကြီးတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့တွေးမြင်ရဲအောင် လမ်းဖော်ပေးနေတယ်လိ်ု့ သဘောပေါက်။
တော်ကြာ မှားကုန်ဒုက္ခ …
ဒီကစ္စက ၀င်ဖောလို့ ကောင်းတာ ဟုတ်ဝူး…
Yin Nyine Nway ကလဲ ရဲရဲ ဖြေကြည့်စမ်းပါ။ မှားမှာ မကြောက်ပါနဲ့ ဘယ်တုန်းက မှန်ခဲ့ဘူးတာမှတ်လို့ ။
ခပ်တည်တည်ပေါ့။ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ဖြေကြည့်၊ အားလုံး ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ဖြေနေကြတာ။ ကိုယ်လည်း အတူတူပါပဲ။
ကိုယ့်ဥာဏ်မှာ ထင်လာတာကို ပြောတာနော့။
ကျွန်တော်က ဘာသာရေးဆို သိပ်မဖြေချင်ပါဘူး ..
ဒီက အကိုက .. ဖေါ်ရွေတဲ့ပုံပေါက်လို့ .. ဖြေကြည့်ပါ့မယ် ..
ဒါပေမယ့် လွဲသွားရင် .. ခွင့်လွှတ်နော် ..
အဲ့ဒီအကိုပြောတဲ့ ဗုဒ္စဘုရား or မဟာလူသား ဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လိုမျိုး “The God of creation ” လို့ပြောနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရှိ သတ္တ၀ါတစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာတာ လို့ ဖြေရင် ..
ကျွန်တော်တို့က လည်း ဘုရားတွေဖြစ်တယ်လို့ ဖြေရင် ..
လက်ခံပါ့မလားမသိပါဘူး .. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကြ၀ဋာကြီးကို ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး .. လူတူ-သက်ရှိ များက စတင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ဒါကို ယနေ့ခေတ် သာမာန်အသိဥာဏ် နဲ့စဉ်းစားရင်တောင် သိနိုင်ပါတယ် ..
ကင်ဆာဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြန့်ပွားနေတဲ့ cell ဖြစ်ပေါ်ဖို့ .. Initiator ဆိုတဲ့ စတင်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ promoter ဆိုတဲ့ ဆင့်ပွားဆင့်ပွားပေးတဲ့ ပစ္စည်း ဆိုပီး လိုအပ်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ သတ္တ၀ါတွေကိုလည်း ကင်ဆာနေရာမှာထားကြည့်ရင် ၊ cancer နေရာက တွေးကြည့်ရင် အဖြေကရှင်းနေမှာပါ ..
ကျွန်တော်တို့ .. Initiator ကို သိဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ..
ကျွန်တော်တို့တတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ဖို့ ၊ လူသားတွေ စကြ၀ဋာကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့
“Initial creator of the universe” or sometimes says ” the god ” ကို သိဖို့ တစ်နေရာဘဲလိုအပ်ပါတယ် သူ့ technology ကို ရဖို့ လေ .. ဟီး ..
ကျွန်တော်က ခရာစ်ယာန် ဘာသာ ကို လေးစား ပါတယ် .. ပီးတော့ ခရာစ်ယာန်ဘာသာကိုလည်း ကိုးကွယ်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း ကိုးကွယ်လျက်ပေါ့ .. ဟီး ..
ကောင်းပါတယ်၊ တစ်ဆူရင် မကယ်ရင် နောက်တစ်ဆူ ကယ်။ ဒါဆို စိတ်ချရတာပေါ့။
မေးခွန်း နံပါတ်၁ကိုပဲဆွေးနွေးပါရစေ ။ကျေနပ်စရာအဖြေဖြစ်မဖြစ်တော့မသိပါဘူး။ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဥပမာပါ။စက်ဝိုင်းတစ်ခုကို သင့် မိတ်ဆွေကိုဆွဲခိုင်းပါ သင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်ကစလဲလိုက်ရှာပါ။ သင်ရှာလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘယ်ကစလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ သာမန်လူတွေရဲ့ညာဏ်ရည်နဲ့ လိုက်လို့ မမှီနိုင်ပါဘူး ……။ အဲတာတွေစဉ်းစားပြီးအချိန်ကုန်နေရင် တရားအားထုတ်လို့ မှ မလွတ်မြောက်သေးခင်သေသွားနိုင်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းသော တရားရှာတွေ့ နိုင်ပါစေ။
အဖြေမရှိဘူး။ ပထမဆုံးပွင့်တဲ့ ဘုရားဆိုတာလည်း မရှိဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိလဲ ဆိုတာ အရင်ရေတွက်ကြည့်နိုင်မလား။
ပထမဦးဆုံး သတ္တ၀ါဆိုတာ မရှိပါ။
၄။ မြင့်မိုရ်တောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တောင်အရပ်ကို သင်္ဘောနဲ့သွားတာ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရဘူးတဲ့။ဒါဆိုရင် မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ် တာဝတိံသာမှာ ဟောတဲ့ အဘိဓမ္မာကြီးက ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲတဲ့။
သိပ္ပံပညာရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေက အကန့်အသတ်တွေ ထွင်းဖောက်နိုင်ပြီလား။ သိပ္ပံပညာက ပြည့်စုံလုံလောက်သွားတဲ့ အခြေအနေမှာရောက်နေပြီလား။
ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တွေမှာ ဒါမျိုးမရှိပါ။
ကျုပ်တစ်ခုမေးချင်တာ????..ကျုပ်မေးတာကို ကိုယ့် အဘိုး အဘေးတွေ၊ ကိုယ့်အရင် မျိုးဆက်တွေပေါင်းများစွာကို ပြန်မေး..။ ကဲ …ကျုပ်တို့ ကမ္ဘာဦး အစက ဘာတွေကိုကိုးကွယ်ခဲ့လဲ။ နတ်ဘုရားတွေ၊ ယစ်ပူဇော်တာတွေ၊ နတ်တွေက စပြီး အခု ဘုရား၊ ဘုရား အဆူဆူ၊ ဘုရားပါင်းများစွာ၊ အယူအဆပေါင်းများစွာ ၇ှိနေခဲ့တာလေ။ ဒါဆို ကျုပ်တို့မျိုးဆက်၇ဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက လူတွေက ကျုပ်တို့ထက်အရင် ဘုရားဆိုတာကို ပိုပြီး သိခဲ့တာ ကျုပ်တို့ထက်မဝေးဘူးနော်။ ဒါဆို နောက်နောင် ဘာဖြစ်မလဲ…အခုတောင် ဘာသာမဲ့ဆိုတာတွေရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ…….????ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပေါင်းများစွာရှိပေမယ့် အားလုံးကတော. ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ ဦးတည်ကြတာ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘာကိုမှ ဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…… ကိုယ်ယုံကြည်တာ ကိုယ်ကိုးကွယ်။…ငြင်းခုံတာတွေ၊ ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးတာတွေက ဘာတွေလဲ။ ဘာသာတရားဆိုတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလင်းရောင်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငြင်းခုန်မနေသင့်တာ အမှန်ပဲ။
ဒါက အချိန်ဖြုန်းတာလို့ ပဲထင်တယ်……..
မှတ်ချက်။ ။ ကျုပ်ဘာသာမဲ့ မဟုတ်ပါ (စိတ်ကသာအဓိကပါ)
ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ဖြေရရင် .. ” We don’t need god (the creator of the universe), we need rules that rule the world and we need techniques to influence the mind. All of these things are taught by Buddha (the Greatest man in history).”
ခရာစ်ယာန် အနေနဲ့ ဖြေရရင် .. ” God is our creator. So, we must not forget her. Without her we can’t be able to stand, write and c the computer. God, like us may be selfish, she may bless only to those who obey her, like her and prey her. ”
ကျွန်တော် မှားသွားရင် ပြင်ပေးပါအုံး ကျွန်တော့် အသိထဲမှာ ဒီလောက်ဘဲရှိလို့ပါ ..
စီရာမိုနန်း ရေးမှပဲ ဂေါ့ဒ်ကို အမျိုးသမီးလိင် she/ her အနေနဲ့သုံးတာ တွေ့တော့တယ်။ ငါသိသလောက် ဂေါ့ဒ်ဆိုတာ အဖိုအမ လိင်မရှိဘူး။ သန့်စင်တဲ့ ဝိညာဉ်တော်သဘောမျိုး အဖိုအမလိင်ကို ဖန်းဆင်းသူအနေနဲ့ လိင်မသတ်မှတ်ကောင်းလို့ ယုံကြည်တယ်ထင်ပါတယ်။ ပြောလည်း အမျိုးသားလိင် He/ his လို့သာသုံးမှာပါ။ ခရစ်တော်က ယောက်ျားမဟုတ်လား။ ပုံစံကြည့်ရတာ စီရာမိုနန်းက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဂေးလား (နောက်တာ၊ အတည်ပြောတာနော်) ။ တော်ကြာနေ ခရစ်ယာန်အစစ်တွေ ရွာလာပြီး ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲလာနွှဲနေမှဖြင့် ပြေးပေါက်မှားနေအုံးမယ်..။
အပြားကျယ်လှသော သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြင့် ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်နေသော
ဆရာကြီး mggwa says ကပေါ့ဗျာ
ဒါမှမဟုတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ကို ယုံကြည်ပေမယ့် အဆင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့
ဒါမှမဟုတ် ဘာမှမယုံဘူး ငါ့×ီးငါဖြဲ ဘယ်သူ ဆဲမလဲကွ အဲ့လိုလား
ဟိုအပေါ်က အာစရိတွေကလည်း သူ့အရိပ်ကြည့် အကောင်မပြောဘဲနဲ့
( ဤအကြောင်းကို ဖတ်ရှု့မိသော ရဟန်းသံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား
ဤသောမေးခွန်းကို ဤနေရာတွင် မသင့်သောအရပ် မအပ်သောအလုပ်ဟူမူ၍ နှလုံးသွင်းကာ
ဤနေရာတွင် ဆိတ်ဆိတ်နေပေးကြပါရန် တပည့်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ
ရိုသေစွာ ခြေစုံဦးခိုက် ( ဟိုသဂျီးဆိုတဲ့လူကတော့ ခြေဦးခိုက်တာလက္မခံပေ )
လျှောက်ထား တောင်းပန်အပ်ပါသည် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား )
သူများတွေ ဖြေနေတာကို မနာလိုမဖြစ်နဲ့လေ။
သူလဲ ဖြေရဲတာလဲ ဟုတ်ပဲနဲ့။
ဒို့ကတော့ “အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော” လို့ တွံ- သင် (မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု)သည်၊
ကျုပ်ကိုများဟောဘို့ တောင်းပန်လိုရင်တော့ စပ်စရာရှိတဲ့အကြွေးတွေ
( လောကုတ္တရာထည်းဝင်တာနဲ့ အကြွေးဆပ်ခြင်းအကြောင်း
ကုန်ကြမ်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်နော ( သဂျီးလေသံဖြင့် ) )
ဆိုလိုတာက ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုထားပြီး တောထွက်တော်မူတဲ့
ဆန်တစ်တင်းခွဲ ဆီတစ်ပိသာ ငပိငါးခြောက် သုံးလစာနဲ့
စကြာဝဠာ ဂြိုလ် ကမ္ဘာတွေ
လူတွေဟာ အသိညဏ်ရှိလာတဲ့အခါ စစ်မှန်တဲ့သဘာဝတရားကို
လူတွေဟာမမြဲတဲ့ပျော်ရွင်မှု မမြဲတဲ့ချမ်းသာမှု မမြဲတဲ့ကျမ်းမာမှုတို့
ဒါတွေကိုမြင်ခဲ့ယင်ဘာမှပြန်မဖြစ်တာ ဘ၀ပြတ်သွား အကောင်းဆုံးမှန်
တခြားဟာတွေဖြေဖို့တော့ . . ဥာဏ်မမှီဘူးဗျို့.. ဒါလေးတော့ဖြေမယ်..
bacteria တွေကို .. ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင် မြင်ရပါသလား.. မမြင်ရဘူးနော်.. ဒါဆို.. အဆပေါင်း ထောင်ချီချဲ့ထားတဲ့ .. Microscope နဲ့ကြည့်ရင်တော့ ..မြင်ရမှာ အသေအချာပေါ့နော်..
ဒါဆို နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်က .. bacteria တွေဆိုတာ တကယ်မရှိပါဘူး.. လျှောက်ပြောတာ ဘာညာလို့ပြောရင်.. သိပ္ပံပညာရှင် အပေါင်း (သြော်..ဒီလူ့နှယ်.. တော်တော်နုံပါလား ) သနားဖွယ်ကောင်းလှပါဘိ.. ဆိုပီး ပြုံးနေမှာအသေအချာပေါ့..
ဒါဆို မြင့်မိုရ်တောင်တို့ .. နတ်ပြည်တို့လည်းရှင်းနေတာပဲ.. အသက်ရှိတုန်း အာရုံခံကြည့်ချင်ရင်..
သမာဓိ၊၀ိပသနာ မျက်မှန်တပ်ကြည့်ကြပေါ့.. ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့တော့ဘယ်မြင်ပါ့မလဲ..
*mggwa*အနေနဲ့(မြန်မာဦးနှောက်တွေက တစ်ခါမှ မသုံသေးလို့ ဈေးကြီးနေလို့ ဈေးကျသွားအောင်လို့ပါ
သုံးပေးမှ ဈေးကျမှာ)ဆိုတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ဥာဏ်ပညာအရမ်းထက်မြက်တယ်လို့ယူဆထားလို့လား။ဒါတွေကို
မေးခွန်းမထုတ်ခင် mggwa ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုဘဲ တစ်ခုခြင်းစီပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။mggwa
ဥာဏ်စဉ်မှီအောင်စဉ်းစားနိုင်ရဲ့လားလို့။ကျမ်းဂန်တွေအားလုံးကို ငြင်းခုန်ခြင်ရင်တော့ mggwa အသက်၁၀၀
၁) သမုတိသစ္စာ သံသရာ ကို အဖြောင့်တန်း နေသည်ဟု ယူမှတ်မှားနေမှု။
၂) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကိုမှန်ကန်စွာ နားလည်ခြင်းမရှိ။
၃) အသုံးချရုံ အသုံးချရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊သတ္တ၀ါ ကို အရှိအဟုတ် ထင်မှတ်မှု ။
တို့မှ မေးခွန်းအမှား ထွက်ပေါ်လာလေသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်၊သတ္တ၀ါ ကို အရှိအဟုတ်ထင်ကာ အဖြောင့်တန်းစဉ်းစားမှု အယူမှား အမှတ်မှားမေးခွန်းများဖြစ်ပေါ်လာသည်။
မေးခွန်းအမှားများဖြစ်ကြောင်း အဂ္ဂိဝစ္စသုတ် တွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ ဒိဌိဖြုတ်တရားများတွင် ထိုသဘောတရားကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားလေသည်။
အသေးစိတ်ကို သိရှိရန် – ဆရာဦးဆန်းလွင် ၏ ဟောကြားချက်များဖြစ်ပါသည်။
မိမိ ကိုယ်ကို အရင် မြင်အောင်ရှူပါ ..
သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ..
အပေါ်ကမေးခွန်းတွေ ဂေါတမဘုရားသွားမေးရင်.. အောက်ကအတိုင်းဖြေလိုက်မယ် ထင်မိပါတယ်..။
.. ထိုအကြောင်း ကိုအဘယ့်ကြောင့် ငါမဟောကြား သနည်း။ မာလုကျပုတ္တ..ထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွား နှင့် မစပ်..မြတ်သော သာသနာတော် ၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်..၀ဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂကင်းခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂ ချုပ်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်း ငှာမဖြစ်နိုင်..သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်..ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို ငါဘုရား မဟောကြား…..
လော့ဂျစ်အရ.. အင်မတန်ရှေ့ နောက်ညီတဲ့.. ဗုဒ္ဓက.. ဒီလိုမေးခွန်းဖြစ်လာအောင်လည်း.. တရားတွေထဲ..ထည့်ဟောမယ်မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒါတွေကို.. သမိုင်းတလျှောက်… ဖြေထားတာတွေ/ဖြေထားသူတွေက.. အရိယာတွေမဟုတ်လို့.. ယူဆမိကြောင်းပါ..။
ကျုပ်ကတော့.. ဖြေမယ်…။ အချိန်နည်းနည်းယူမယ်နော..။
ဒီလိုခေတ်မှာ.. ဒီလို ဟိန္ဒူအတွေးအခေါ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့အယူတွေ..မှန်ကန်နေပါကြောင်း သက်သေပြနိုင်တာတွေ အများကြီးပါ..။
၁) ဘုရားသခင်ကို ဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲ။
၂)ကြက် ဥ ကစလို့ ကြက်မဖြစ်လာတာလား။
ကြက်မ ကစလို့ ကြက်ဥဖြစ်လာတာလား။
၃) မျိုးစေ့ကြောင့် အပင်စဖြစ်လာတာလား။
အပင်ကြောင့် မျိုးစေ့စဖြစ်လာတာလား – ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးသုံးခုကို ဖြေနိုင်ရင်
မိတ်ဆွေရဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေအလိုလို ထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(မရှိပညတ်) အချိန်-နေရာ-ပုဂ္ဂိုလ်၊သတ္တ၀ါ ကို အတည်ယူ အဟုတ်ထင်မှုကြောင့် ဒိဌိ-၀ိစိကစ္ဆာဖြင့် မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်ကာ ပြဿနာတက်ရလေသည်။
ကိုယ့်ရဲ့ ယူဆချက်တွေကို ရေးချပြသင့်တယ်
ခြွင်းချက်ကတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့အာဘော်တွေကို ဗုဒ္ဓတရားတွေနဲ့
အတင်းလိုက်ပြီးအမျိုးမစပ်နဲ့ပေါ့နော ဘုရားဟောလိုလို ကိုယ်ဟောလို မရှင်းမရှင်းနဲ့
ကွန်ဖြူးရှပ်လိုမျိုး လက်ရှိလူမှု့တိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ပြီးပြောပေါ့နော
ဥပမာ စီးပွားရေးတိုးတက်ဘို့ စိုပ်ပျိုးရေးတွေ မွေးမြူရေးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သင့်တယ်ပေါ့
ဒီသဘာတွေကို ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ အတင်းရွှေမျိုးလိုက်စပ်လို့ကတော့
မွေးမြူရေးတွေလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ အသက်တွေကို ဖန်တီးပြီး
သတ်ကြဖြတ်ကြတာကို ဗုဒ္ဓကမှ မဟောထားတာဘဲ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဘုရားဟောလိုလို ကလားဟောလိုလိုတွေဖြစ်လာလို့
တစ်ခုရှိတာက ဒီမေးခွန်းကို မေးခွန်းလို့ဆိုလိုက်တိုင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတွေကို ချဉ်းကပ်ပြီး
စွတ်ဖြေကြတာကိုက နည်းနည်းလွဲကုန်ပြီလို့ ပြောရင်လက္ခံကြမလားသိဘူးနော
ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော် အယူအဆတွေနဲ့ လုံးဝ မကိုက်ညီတာကို
ဆိုလိုတာက သူများလုပ်ကြံထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဗုဒ္ဓတရားလို့
ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ဘုရားတွေပွင့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ ရှေးဘုရားတို့ရဲ့ အလေ့အထအတိုင်းပဲ လိုက်နာတယ်၊
( လိုက်နာတယ် ) ဆိုတာ ဘယ်ဘုရားကဟောလဲ ဒီစကားမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူး
ဗုဒ္ဓက အစအဆုံးဆိုတဲ့တရားကို သဂျီးညွှန်းထားသလိုမျိုး လုံးဝမဟောထားတဲ့ဥစ္စာ
အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်တော့ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားက သုမေဓာရှင်ရသေ့ ကို
နောင်ဘုရားဖြစ်မယ် ငါ့ရဲ့အလေ့ထအတိုင်းလိုက်နာလို့ဟောခဲ့တာမှမဟုတ်တာ ဗျာဒိတ်ဘဲပေးခဲ့တာ
မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သဘောကို ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်မိတယ်
ကိုယ်တိုင်သိပြီးမှ အဆင့်ဆင့် ဘုရားဖြစ်တယ်
ဘုရားဖြစ် ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်ကို ရပြီးဆင်ခြင်တဲ့အခါမှ သူ့ရဲ့တရားသိပုံနဲ့
အကျင့်တော်တွေဟာ ရှေးဘုရားတွေနဲ့ တူနေတာကိုတွေ့ရတယ်
ဒါ့ကြောင့် ရှေးဘုရားတွေလိုဘဲ သိတဲ့တရားကလည်းအတူတူ အကျင့်သိက္ခာတွေကလည်း
အတူတူဘဲလို့ဟောတာကို သူများလုပ်ကြံပြီးဟောတာကို ကိုယ်က ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ချဉ်းကပ်ပြီး
ဖြေတော့ ဒီစကား ဘုရားပြောခဲ့တယ်လို့ လက္ခံသလိုဖြစ်မနေဘူးလား
ဒီလိုသာရှေးဘုရားတွေပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင် ဒုက္ကရစရိယာကို ခြောက်နှစ် အပင်ပမ်းခံပြီးကျင့်မလား
ဒါတွေကို မ်ိမိတို့က နားလည်ကြဘို့လိုလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်တာဘဲ
( ဘုရားတစ်ဆူမှာ ၂၄-အသင်္ချေ၊ ကုဋေ ၈၀နဲ့ ဗိုလ်ခြေတစ်သိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်မယ်ဆိုပဲ )
ဘယ်ဘုရားကများ ငါတော့ သတ္တဝါ ဘယ်၍ဘယ်မျှ ခြွတ်လိုက်မယ်ကွလို့
ကိုယ့်လူကြည့်ရတာ သာသနာပြုမယ် သတ္တဝါတွေကိုကယ်မယ်ဆိုပြီး
ဓာတ်လုံးဖိုထိုးတဲ့ ဘိုးတော်ကျမ်းတွေဒါမှမဟုတ် ရသေ့ကျမ်းတွေကိုဖတ်ပြီး
ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို လာဝေဖန်တာကတော့ မနိမ့်ပါဘူး
အရင်ကတော့ ကျုပ်တီထွင်ထားတဲ့ စူပါဓာတ်လုံးတစ်မျိုးရှိတယ်
ပွတ်ရင်ပြောင်တယ် ဆောင်ထားရင်လေးတယ် ရေစိမ်သောက်ရင်သေးပေါက်တယ်
ဒါပေမယ့်ခုတော့ ဒီဓာတ်လုံးထက်အစွမ်းထက်တဲ့ စူပါ့စူပါဓာတ်လုံးကြီးကို တီထွင်နေတယ်
အချိန်နည်းနည်းယူမယ်နော ( သဂျီးလေသံဖြင့် )
အဲ့သည်ဓာတ်လုံးကတော့ ပထဝီ အာဘော ဝါယော တွေကို ပြုပြင်ပေးမှာ
ဥပမာ အီအီးပါတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ မာမာပျော့ပျော့ ဓာတ်တွေကို
ကျုပ်ရဲ့ဓာတ်လုံးနဲ့ တို့လိုက်ရင် ဓာတ်မြေသြဇာတွေဖြစ်မှာဗျာ
နည်းနည်းနည်းပညာထပ်မြှင့်လိုက်ရင် ဓာတ်သတ္တုတွေဖြစ်လာဦးမှာ ဖြစ်ဦးမှာ
ရှူရှူးပေါက်တဲ့ခါထွက်လာတဲ့ဓာတ်တွေကို ကျုပ်ရဲ့ ဓာတ်လုံးနဲ့တို့လိုက်ရင်
တချို့လူတွေ (သေပြီးမှ မဟုတ်ပဲ) ထိုသူ မသေသေးပဲ လူဝင်စားသလိုပြန်ဖြစ်နေခြင်း၊
ဆိုတာကတော့ ခုလက်ရှိ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဘယ်မှာ ဝင်စားနေပြီလဲလို့ဆိုတာလဲ
လုပ်ပါဦး သဂျီးအမြင်နဲ့ဆို ဒါ ဘစ်ဇနစ်ဘဲ
ဘောလုံးတစ်လုံးကို ဖင်ခုထိုင်ပြီး ခင်ဗျားဆင်းစားပေတော့
ဒါမှ လက်တွေ့ကျတာ ဒီထက်လက်တွေ့ကျတဲ့တရားဘာမှမရှိဘူး
ဒီမေးခွန်းတွေကို ခရစ်ယန်တွေက တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို မမေးသင့်ပါဘူး။
ဟိန္ဒူ ဂျိန်း၊ ဗြဟ္မဏတွေကို မေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမေးခွန်းပါ အကြောင်းအရာများသည် ဗုဒ္ဓဘုရားဟောမဟုတ်ပါ။
ဂျိန်း၊ ဗြဟ္မဏတွေရဲ့ (တက္က) ကြံဆအယူတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုသစ္စာ
ဒါကို မဖြေပါလို့ ဖြေဆိုလိုက်ပါသည်။
လူတစ်ယောက် အသိဥာဏ် (ဦးနှောက်)နဲ့ သိနိုင်တာထက် လွန်ကဲတာတွေ စဉ်းစားကြရင် ဘာအကျိုးရှိကြမလဲ။
အားလုံးသောသူတွေပြောတာကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ဒီအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီးငြင်းခုန်မနေကြပါနဲ့။ဘယ်သူမှန်သည် ဘယ်သူမှားသည်မပြောလိုပါ။ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ပြောကြတယ်ထင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆနှင့် နဲနဲလေးလွဲနေတယ်လိုထင်ပါတယ်။ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ကိုးကွယ်ကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးငြင်းကြတာမကောင်းပါ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ်မေးကြည့်ပါ။မိမိက မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာလား။ မိမိကိုယ်တိုင်းယုံကြည်လို့၊ သိလို့၊ နားလည်လို့၊သဘောပေါက်လို့ ကိုးကွယ်တာလားဆိုတာကို။ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည် အဲဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်။
မှန်တာကို ရဲရဲတင်းတင်း သိရဲသောစိတ်၊ တွေးရဲသောစိတ်၊ ပြောရဲသောစိတ်သတ္တိရှိဖို့လိုတာပေါ့ Kai Kai။
အမှန်ကို ရဲရဲတင်းတင်းသိပြီးမှ ယုံကြည်သင့်လို့ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကိုယ့်ဘာသာရေးဆရာတွေကပြောလို့ မျက်စိမှိတ် စွတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု နှစ်မျိုး၊ နှစ်စားတော့ ရှိတာပေါ့။
Kai Kai က ဘယ်အစားထဲကလဲ ?